Ilkaha - Adeegga Caafimaadka Bulshada Inc.
Markay tahay nadaafadda afka, Community Health Service Inc. (CHSI) waxay jeclaan lahayd inay kaa caawiso inaad firfircoonaato oo aad ka hortagto dhibaatooyinka intaysan xitaa bilaaban! CHSI waxay ku bixisaa adeegyo ilko oo kala duwan meelaheena Grafton, Moorhead, Rochester iyo Willmar.
Kooxdayada ilkaha waxay diyaar u yihiin inay qoyska oo dhan siiyaan daryeel caafimaad oo afka ah; tan waxaa ka mid ah carruurta, dhalinyarada, dadka waaweyn iyo bukaanka gaboobay. Fadlan wac bukaan socod eegtada deegaankaaga ku saabsan maalmaha iyo saacadaha gaarka ah ee daryeelka ilkaha oo ballanta ballantaas ilkaha ah ballanta!
Soo saarida Fudud
Goobaha La Heli Karo
Wac si aad ballankaaga u sameysatid maanta!